सावधान ! ट्राफिक प्रहरीले ल्यायो ‘राडर गन’ – Everest Dainik – News from Nepal
सावधान ! ट्राफिक प्रहरीले ल्यायो ‘राडर गन’
बुटवल, चैत १ । के तपाईले तीब्र गतिमा आफ्नो सवारीसाधन हुइँक्याउनुभएको त छैन ? ट्राफिक प्रहरी नभएको फाइदा उठाउँदै तीब्र गतिमा सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ ? यदि यो गर्नुभएको छ भने तपाई ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा पनुहोला ख्याल गर्नुहोस् ।
प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको अवस्था डरलाग्दो छ । प्रदेशमा हरेक दिनजसो दैनिक ३ देखि ४ वटासम्म सडक दुर्घटना भएका छन् । प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ अनुसार ८ सय ५६ दुर्घटना भएका छन् । जसमा परी ८ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
त्यसमध्ये ८ सय ५० जना गम्भीर घाइते र ५ सय ७१ सामान्य घाइते भएका छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को माघ मसान्तसम्म ६ सय ४० दुर्घटना भएका छन् । जसमा ३ सय ४८ मृत्यु भएको छ । जसमा ५ सय ५५ जना गम्भीर घाइते र ४ सय ४८ जना सामान्य घाइते भएका छन् ।
प्रदेश ५ साविक लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चल समेटेर बनेको प्रदेश हो । प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीमा ५ लाख ६८ हजार ८ सय ७६ गाडी दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी राप्तीमा ४९ हजार २ सय ३८ र भेरीमा ९९ हजार २ सय ५ सवारी दर्ता छन् । समग्र प्रदेशमा गरी ८ लाख गाडीहरू छ । त्यसमध्ये ५ लाख ५० हजार भन्दा गुडने बुढाथोले बताए। यो समाचार आजको लोकान्तरमा राखिएको छ ।
ट्याग्स: butwol, radar gun